जेठ १५, २०७४ आइतवार राति सामाजिक सञ्जालमा एकाएक राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधनको हल्ला फैलियो । दश मिनेटमै उक्त खबर सामाजिक सञ्जालबाटै भाइरल भयो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमेतले घिमिरेप्रति श्रद्धाञ्जली लेखेपछि आशंका थपिने नै भयो । तर सामाजिक सञ्जालमा भएको त्यो सनसनीपूर्ण हल्लाबारे राष्ट्रकवि स्वयं भने बेखबर थिए । सोमवार बिहान उठेपछि मात्र घिमिरेले हल्लाबारे जानकारी पाए ।
सोमवार मध्याह्न लैनचौरस्थित निवासका पुग्दा राष्ट्रकवि घिमिरे शुभेच्छुकहरूसँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए । आइतवार अबेला फैलिएको अफवाहका कारण शुभेच्छुक र साहित्यकारहरू राष्ट्रकवि घिमिरेको अवस्था बुझ्न निवासमै पुगेका थिए ।
बिहान उठ्नासाथ राष्ट्रकविकी धर्मपत्नीले मुस्कुराउँदै कविलाई सुनाइन् – ‘हजुरको आयु बढ्यो !’
एकछिन कवि अलमल्ल परे । तर परिवारले हिजो रातिको सम्पूर्ण घटना सुनाएपछि चाहिँ उनी आश्चर्यमा परे । घिमिरे यो घटनालाई जिन्दगीकै अविस्मरणीय घटनाका रूपमा लिन्छन् ।
‘बिहान उठ्दा आफैं मरेको खबरले खलबल पार्नु मेरा लागि नौलो कुरा हो,’ कवि घिमिरेले सोमवार मध्याह्न आफ्नै निवासमा लोकान्तरसँग भने, ‘साहित्य लेखेकै आधारमा मैले यति धेरै श्रद्धा पाएको रहेछु भन्ने कुराको बोध भयो । म आश्चर्यमा परें ।’
छेउमा उभिएका उनका छोरा राजीव घिमिरेले थपे, ‘हामीले त बुवालाई बिहान उठेर सुनाएका थियौं । उहाँले दुःख मान्नुभएन ।’
घिमिरेले उमेरको शताब्दी पूरा गर्न अब डेढ वर्ष बाँकी छ । राष्ट्रकविको उपाधि पाएका यी पुराना कवि अहिले महाकाव्य ‘ऋतम्भरा’ लेखिरहेका छन् । स्वस्थ छन् तर कान अलिक कम सुन्छन् ।
बुढेसकालले केही निर्बल पनि बनाएको छ उनलाई । तर उनी थाकेका छैनन्, त्यसैले त महाकाव्य सक्ने तरखरमा छन् ।
‘अरू सबै अनुभव गर्न पाएपनि आफ्नै मृत्युको अनुभव गर्न चाहिँ नपाइने । तर मैले आज त्यो पनि अनुभव गर्न पाएँ,’ स्वादिलो हाँसो हाँस्दैै उनले सुनाए, ‘हिजो राति खलबल भएछ । परिवारले मलाई बल्ल आज बिहान सुनाए ।’
यसरी आफ्नो अनुभव सुनाइरहँदा उनको मुहारको आभा अझै उज्यालो देखिएको थियो ।
त्यसो त राष्ट्रकविले मृत्युसम्बन्धि एउटा गीत पनि लेखेका छन् । स्वरसम्राट् नारायणगोपालले गाएको उक्त गीतको बोल छ : ‘आजै र राति के देखें सपना मै मरी गएको’ । तर अहिले राष्ट्रकविले मृत्युको सपना देखेनन्, कसैले उनको मृत्युको अफवाह फैलाइदियो ।
आखिर आफ्नै मृत्युको खबर सुन्दा पनि उनलाई किन दिक्क लागेन त ?
जीवित छँदै आफ्नो मृत्युको अनुभव कसले गर्न पाउँछ ? यस्तो सौभाग्य सबैले कहाँ पाउँछ र ? घिमिरेले आभारका साथ सुनाए, ‘नेपालीहरूले मप्रति कस्तो सद्भाव राख्दा रहेछन् भन्ने नजिकबाट नियाल्न पाएँ ।
उनले फेरि थपे, ‘यो सुखद घटना हो ।’
‘कसैले जीवनमा घटित कुनै घटना सुनाउनुस् न भनेर सोध्यो भने सबभन्दा पहिले यही सुनाउनुपर्छ । म मरेको कुरा मलाई नै थाहा भयो’, उनले सुनाइरहेका थिए ।
घिमिरेलाई आफ्नो मृत्युको खबरले कसैलाई फाइदा नहुने हुनाले स्वार्थका लागि फैलाएको हल्ला होइन भन्छन् । ‘सकारात्मक सोच्यो भने यसलाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ । फेसबूकमा हल्ला फैलाउनेले मलाई मार्न खोजेका होइनन्, अब के हुने रैछ भनेर अनुमान गर्न खोजेको हुनुपर्छ ।’
उनी हाँसे । छेउमा बसेर बुवालाई साथ दिइरहेका छोरा राजीव पनि हाँसे ।
सामाजिक सञ्जालबाट कहिलेकाहीँ यस्ता हल्ला फैलिएपनि उनी सामाजिक सञ्जाललाई भने पूर्णतः सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, ‘इन्टरनेटले टाढा भएका मान्छेसँग पनि मज्जाले कुरा गर्न पाइएको छ । पहिले त यस्तो सुविधा कहाँ थियो र ?’
छोराले भने, ‘बुवाले खाना खानुभएको छैन । खाना खाने बेला भयो ।’
किचन जानुअघि साह्रै घतलाग्दो हाँसो हाँस्दै राष्ट्रकविले कविता सुनाए :
लाख लाख नेपालीको माया पाएँ
जाँदाजाँदै उनले थपे, ‘अब यही घटनामा एउटा कविता लेख्छु ।’